पुरुषले यी ३ ‘अंग’ हेरोस् भन्ने चाहन्छन् महिला ! – Khula kura
पुरुषले यी ३ ‘अंग’ हेरोस् भन्ने चाहन्छन् महिला !
यो पनि- शरीरका यी ६ अं ग ठूला हुने महिला छाड्दै नछाड्नु
हिन्दू शास्त्रअनुसार महिलाहरुलाई लक्ष्मीको दर्जा दिइन्छ । महिलाहरु खुशी र सुखी भएको घरमा सधै लक्ष्मीको बास हुने मान्यता राखिन्छ । कुनै घरमा महिलाहरुलाई अपमा न गर्ने वा नराम्रो व्यबहार गरिएमा त्यो घरमा शान्ति छाउँदै ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार महिलाको शरीरको कुनै पनि भाग ठूलो छ भने त्यसले ती महिलाका धेरै गुणहरुबा बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ । महिलाका यी अं ग ठूलो भएमा ती महिलाहरु भाग्यमानी हुन्छन तसर्थ त्यस्त महिलासँग बिवाह गर्नु उत्तम हन्छ ।
नाई टो– ठूलो वा गहिरो ना ईटो भएका महिलाहरुले पनि जीवनमा अत्यधिक धन लाभ गर्ने र जीवनमा ठूलो सफलता हँसिल गर्न सक्छन् ।
खुट्टा– ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार लामो खुट्टा भएका महिलाहरु धेरै भाग्यमानी हुने रजीवनमा प्रशस्त धन लाभ गर्न सक्नेछन् ।
घाँटी– शास्त्रका अनुसार लामो घाँटी भएकामहिलाहरु मेहेनती र आर्थिक रुपले सम्पन्न हुने गर्छन। यी महिलाहरुलाई समाजमा निकै मान–प्रतिष्ठा समेत पाउने अवसर मिल्नेछ।